U-2018-19 I-Essay Application Common iyakhuthaza: Iingcebiso, iisampulu
Kubafundi nabazali Iimvavanyo zeSampuli kunye namacebiso
I-2018-19 I-Essential Application Application iyakhuthaza
Iingcebiso kunye nezikhokelo zee-7 ze-Essay Options kwiSicelo esitsha esivamile
Ngomjikelezo wesicelo esingu-2018-19, isicatshulwa soLuntu oluqhelekileyo sitshintshi sitshintshile ukusuka kumjikelezo we-2017-18. Ngokubandakanywa kwenketho ethi "Isihloko Sokhetho Lwenu", abafakizicelo banethuba lokubhala malunga nantoni na abayibalulekanga ukuba babelane nabanye abantu kwiofisi yokuvuma.
Iimpendulo zangoku ziphumo zengxoxo enkulu kunye neengxoxo ezivela kumaziko amalungu asebenzisa iSicelo esisodwa.
Umda wokulinganisa ubude umele kuma-650 amagama (ubuncinci ngamazwi angama-250), kwaye abafundi baya kufuna ukukhetha kwizinto ezikhethiweyo zingezantsi. Iincwadana zenzelwe ukukhuthaza ukucamngca nokuzazisa. Ukuba isicatshulwa sakho asibandakanyi ukuhlalutya, awuphumelelanga ngokupheleleyo ekuphenduleni ukukhawuleza.
Ngomnyaka wokuqala wale ncoko, inqununu # 5 yayisithandwa kakhulu kubafakizicelo beekholeji. Yalandelwa yinketho # 7 kunye nenketho # 1. Qaphela, nangona kunjalo, okokukhetha ukhetho akubalulekanga njengendlela owenza ngayo incoko yakho.
Ngezantsi zikhetho ezisixhenxe ngezinye iingcebiso ngokubanzi:
Abanye abafundi banemvelaphi, ubunikazi, umdla, okanye italente enenjongo kakhulu bakholelwa ukuba isicelo sabo asiyikuphelela ngaphandle kwayo. Ukuba oku kuzwakala ngathi, nceda ucobele ibali lakho.
"Ubume" bentliziyo yeli khawulezo. Yintoni eyenza wena?
I-prompt ikunika ilungelo elininzi lokuphendula lo mbuzo kuba unokubhala ibali malunga "nomvelaphi, ubunikazi, umdla, okanye italente". "Imvelaphi" yakho ingaba yinkalo ebanzi engqongileyo ekuncediseni uphuhliso lwakho olunjengokukhula kwintsapho yempi, ukuhlala kwindawo enomdla, okanye ukujongana nesimo sengane esingaqhelekanga.
Ungabhala malunga nesiganeko okanye uluhlu lweziganeko ezinempembelelo enkulu kwizisi zakho. "Umdla" wakho okanye "italente" ingaba yintando eqhubekile ukuba ube ngumntu onamhlanje. Nangona kunjalo uhamba ngokukhawuleza, qinisekisa ukuba ungaphakathi ukhangele kwaye uchaze indlela kwaye kutheni ibali oyithethayo linenjongo.
Bona ezinye iikhompyutheni kunye neSicwangciso seNkcazo ye-Essay Option # 1
Isampula isampula yenketho # 1: "I-Handiwork" nguVanessa
Isampula isampula yokukhetha # 1: "Abantwana bam" nguCharlie
Isampula isampula yokhetho # 1: "Nika iGoth ithuba"
Isampula isampula yokukhetha # 1: "I-Wallflower"
Izifundo esizithatha kwiimithintelo esizifumanayo zingundoqo kwiimpumelelo kamva. Xelela ixesha ojamelene nalo mngeni, ukubuyisela emuva okanye ukuhluleka. Kukuchaphazele njani, kwaye yintoni oyifunayo kumava?
Oku kungase kubonakale kuhambelana nento yonke oye wafunda endleleni yakho ekolishi. Kukhululekile ngakumbi kwisicelo sokubhiyozela impumelelo kunye nokufezekiswa kunokuba kuxoxwe ngezinto ezithintekayo kunye nokungaphumeleli. Ngethuba elifanayo, uya kuphazamisa abantu abafakwe kwiikholeji xa ungabonisa ukukwazi kwakho ukufunda kwiimpazamo zakho kunye neeposiso. Qinisekisa ukuba unikezela isikhala esibalulekileyo kwisiqingatha sesibini sombuzo-ufunde njani kwaye ukhule ukusuka kumava?
Ukwazisa kunye nokunyaniseka kukubalulekileyo kunye nale nyathelo.
Bona ezinye iikhompyutheni kunye neSicwangciso seNkcazo ye-Essay Option # 2
Isampula yesampula yokukhetha # 2: "Ukukhangela" nguRichard
Isampula isampula yokhetho # 2: "Ootitshala beeMfundi" nguMax
Ukhetho # 3
Cinga ngethuba apho wawubuza okanye uphikisa inkolelo okanye ingcamango. Yintoni eyabangela ukucinga kwakho? Waba yini umphumo?
Gcina ukhumbule indlela okuvulekileyo ngayo le mphulo. "Inkolelo okanye ingcamango" oyihlolisayo ingaba yakho, omnye umntu, okanye yeqela. Iingqinisiso ezilungileyo ziza kunyaniseka njengoko zihlola ubunzima bokusebenza ngokuchasene nesimo semeko okanye inkolelo ethembekileyo. Impendulo yombuzo wokugqibela malunga "nesiphumo" somngeni wakho mfuneko akufuneki kube yimbali yempumelelo. Ngamanye amaxesha ekubuyiseleni, sifumanisa ukuba indleko yesenzo mhlawumbi ikhulu kakhulu. Nangona ukhetha oku kuhamba, isicatshulwa sakho sifuna ukutyhila enye yezinto zakho eziphambili.
Ukuba inkolelo oyinseleleko ayinikeli abantu ukuba bamkele iwindow ebomini bakho, ngoko awuphumelelanga nale mphumela.
Bona ezinye iikhompyutheni kunye neSicwangciso seNkcazo ye-Essay Option # 3
Isampula isampula yokukhetha # 3: "iGym Class Hero" nguJennifer
Chaza ingxaki oye wayisombulula okanye ingxaki onokuyicombulula. Ingaba ngumngeni weengqondo, umbuzo wophando, inkinga yokuziphatha - nantoni na ebaluleke kakhulu, kungakhathaliseki ukuba yimalini. Cacisa ukubaluleka kwayo kuwe kunye nawaphi amanyathelo owathatheyo okanye onokuthathwa ukufumanisa isisombululo.
Apha, kwakhona, isicelo esiqhelekileyo sikunika ezininzi iindlela zokukhetha umbuzo. Ngekhono lokubhala malunga "nomngeni weengqondo, umbuzo wophando, inkinga yokuziphatha," unokubhala ngokubhekiselele kwiphina into oyifumene ibalulekileyo. Qaphela ukuba akudingeki ukuba usombulule ingxaki, kwaye ezinye zeengqungquthela ezifanelekileyo ziza kuphanda iingxaki ezifuneka zixazululwe kwikamva. Qaphela ngeli gama lokuvula "uchaza" - uya kufuna ukuchitha ixesha elide uhlalutya ingxaki kunokuba uchaze. Esi sihloko sesehlo, njengamanyathelo onke, siyakucela ukuba uqalise phambili kwaye wabelane nabantu abamkelweyo oko kukuxabisayo.
Jonga ezinye iikhompyutheni kunye neeklasti ze-Essay Option # 4
Isampula yesampula yenketho # 4: "I-Cube yaseRubik yasegogo"
Option # 5
Xoxa ngempumelelo, isiganeko, okanye ukuqonda okuye kwakha ixesha lokukhula komntu kunye nolwazi olutsha okanye wena.
Lo mbuzo ukhankanywe ngo-2017-18, kwaye ulwimi langoku luphuculo olukhulu.
Ukusetyenziswa ngokukhawuleza ukuthetha ngokuguquka ukususela ebuntwaneni ukuya ekubeni ngumntu omdala, kodwa ulwimi olutsha malunga 'nexesha lokukhula komntu siqu' luyindlela engcono kakhulu yokufunda nokuvuthwa (akukho siganeko esisenza sibe ngabantu abadala). Ukukhula kuvela njengomphumo wesitimela eside kunye nezifezekiso (kunye nokungaphumeleli). Eli thuba lukhetho olukhethekileyo ukuba ufuna ukuhlola isiganeko esisodwa okanye impumelelo ephawulwe ibalulekileyo kwi-intuthuko yakho. Qaphela ukuba ugweba i-hero "i-hero" i-office-admissions ii-ofisi zivame ukugqithiswa kunye neengqinisiso malunga nokunciphisa i-seasondown okanye ukusebenza ngokugqwesileyo kwidlali yesikolo (jonga uluhlu lwam lwezihloko eziphathekayo eziphathekayo ). Ezi zinokuthi zibe zihloko ezifanelekileyo kwiincoko, kodwa qiniseka ukuba isicatshulwa sakho sihlalutya inkqubo yakho yokukhula, kungekhona ukuziqhayisa malunga nokufezekiswa.
Bona ezinye iikhompyutheni kunye neSicwangciso seNkcazo ye-Essay Ikhetho # 5
Isampula isampula yenketho # 5: "Buck Up" nguJill
Option # 6
Chaza isihloko, ingcamango, okanye imbono oyifunayo ukuze ulahlekelwe yinto yonke. Kutheni iyakuthintela? Yintoni okanye ubani ojika kuyo xa ufuna ukufunda ngaphezulu?
Olu khetho lutsha ngokutsha ngo-2017, kwaye likhawuleza ngokukhawuleza. Ngokwenene, kukucela ukuba uqaphele kwaye uxoxe ngento enokukuvakalisa. Umbuzo unika ithuba lokuchonga into ekhangela ubuchopho bakho kwi gear ephezulu, cingisisa ukuba kutheni kukhuthaza, kwaye ubonakalise inkqubo yakho yokumba ubunzulu kwizinto ozithandayo. Qaphela ukuba amagama angundoqo apha- "isihloko, ingcamango, okanye imbono
Nangona ulahlekelwa ngumkhondo wexesha xa usebenza okanye udlala ibhola, umdlalo mhlawumbi awuyiyo ikhethelo ekhethekileyo kulo mbuzo othile.
Bona ezinye iikhompyutheni kunye neSicwangciso seNkcazo ye-Essay Option # 6
Option # 7
Yabelana ngesincoko kunoma yimuphi umxholo ozikhethile. Ingaba enye ebhaliwe, enye ephendula kwisithuba esithile, okanye enye yoyilo lwakho.
Inqaku "elikhethiweyo elikhethiweyo" elikhethiweyo lisuswe kwiSicelo esisetyenziswayo phakathi kuka-2013 no-2016, kodwa ngoku sibuyele kwakhona kumjikelezo we-admission 2017-18. Sebenzisa olu khetho ukuba unayo ibali ukwabelana ngalo alikwanelanga nakwezinye iinketho ezingentla. Nangona kunjalo, izihloko ezi-6 zokuqala zibanzi kakhulu kwaye zininzi zokuguquguquka, ngoko qiniseka ukuba isihloko sakho asikwazi ukuchongwa ngenye yazo. Kwakhona, musa ukulinganisa "isihloko esiyikhethayo" kunye nelayisenisi yokubhalwa kwindlela yokudlala okanye inkondlo (ungangenisa izinto ezinjalo ngekhetho "Ulwazi olongezelelweyo"). Iimvavanyo ezibhaliweyo kule nyathelo zifuna ukufumana izinto kunye nokuxelela umfundi wakho ngento ethile ngawe. Ukucoca kulungile, kodwa ungacacanga kwixabiso lemxholo onenjongo.
Bona ezinye iikhompyutheni kunye neSicwangciso seNkcazo ye-Essay Option # 7
Isampula yesampula yokukhetha # 7: "IHero yam uHarpo" nguAlexis
Ezinye iingcamango zokugqibela: Naluphi na ukhawuleza ukhetha, qiniseka ukuba ukhangele ngaphakathi. Uxabisa ntoni? Yintoni eyenze wakhula njengomntu? Yintoni eyenza ube ngumntu oyingqayizivele abantu abamkelekileyo abaya kufuna ukumema ukujoyina i-campus yabo yoluntu? Iingqinisiso ezilungileyo zichitha ixesha elide kunye nokuhlalutya, kwaye azichitheli ixesha elingenamlinganiselo nje nje ngokuchaza indawo okanye isiganeko. Uhlalutyo, ingengcaciso, luya kubonakalisa izakhono ezibalulekileyo zokucinga ezizibonakaliso zabafundi bekholejini.
Abantu abasemsebenzini oqhelekileyo baye bafaka umnatha omkhulu kunye nale mibuzo, kwaye phantse nantoni na ofuna ukuyibhala malunga nayo inokungena phantsi kweyodwa enye yeendlela.
Iingcebiso zoKhetho lweeNgcaciso zoBuntu kwiSicelo esiQhelileyo
Izihloko ezimbi zeeKholeji zokuVunywa
ISampula yoLwazi oluSetyenziswayo oluqhelekileyo: Impumelelo ebalulekileyo
Impendulo emfutshane Impendulo ekusebenzeni kwi-Burger King
Isicelo Esiqhelekileyo Siphendula Impendulo
2017-18 Umxholo wesicelo oqhelekileyo Option 4 - Ukuxazulula ingxaki
Iingcebiso ze-Essay Essay kumntu ochaphazelekayo
Isampula esinqongopheleyo Umxholo weeDyuvesi kwiDyuvesi
Iingcebiso zokubhala i-Essay kwiNgqungquthela eya kuKhuseleko lwaBantu
"I-Gym Class Hero Hero" -IsiXhosa soMsebenzi oqhelekileyo Isampula seNketho # 3
AmaBusiness Majors: ezeMali
Indlela yokuxelela iFayile evela kwiNcwadi e-Perl
Umnqweno weMveliso yoTywalayo kwi-25 Degrees Celsius
Iine Cerebral Cortex Lobes zeBongo
Isingeniso soBrownian Motion
Iimfazwe zeMfazwe zaseFransi nakwiNdiya / eziMinyaka ezisixhenxe
Imfazwe yaseMerika: iMfazwe yaseMemphis
Yintoni iCuffing Therapy?
Utshintsho olutsha Kwiimidlalo zeBhola eziyi-8
Ukuqaphela ukuQulunqwa: Phinda uze usebenzise amandla
Bayabaphi Abazalwana BaseRoma Yamandulo?
I-HCCI - Ukuxhatshazwa kweNkcitho yokuXhoxisa
Igama legama lesiPolish Iintsingiselo kunye neMvelaphi
Putter o lukhulu
Ukujonga Kwezinye izakhiwo zikaFrank Gehry
Izihloko ezingama-250 kwiimvavanyo eziqhelekileyo
Uqeqesho olupheleleyo lweeNkcazo kwiZikolo ezizimeleyo
Iprofayili kaDeane Downs
I-Geophagy - Ukutya ukungcola